MAXAA KA KALA DUWAN BRAHMA KA COCHINCHINA: SHARAXAAD KA TIMID DIGAAGGA DIGAAGGA, SAWIRADA, ASTAAMAHA MAWDUUCA, ISKU MIDKA AH NOOCYADA KALE EE DIGAAGA, SIDA ORPINGTON IYO WIANDOT - BEERAHA DIGAAGA
Faahfaahin faahfaahsan: waa maxay farqiga u dhexeeya digaagga digaagga Brahma iyo Cochinquina?
Marka la xuso shimbiraha hoyga, fikradaha ugu horreeya isla markiiba waxay soo baxaan ku saabsan dimoqraadiyada iyo macaluulada, sharoobooyinka dhalmada iyo duqsiyada. Dad aad u yar ayaa xusuustaa naasaha qaaska ah ee qashinka ah. Iyo xaqiiqda ah in ay jiraan noocyada ornamental ee digaagga, oo waxay yaqaanaan oo kaliya jecel.
Mid ka mid ah "xiddigaha digaaga" ayaa ah dhagaxyada Brahma iyo Kochinquin, dhar gogol leh oo daboolan leh oo ka soo baxa afuufaha ilaa talooyinka cirbadaha. Haa, lugahoodu si buuxda ayaa loogu daboolay baalal "surwaal"!
Sharaxaada Brahmaputra jilicsan
Brama waa shimbir aad u weyn oo aad u weyn oo leh jimicsi heer sare ah iyo lugo dheer. Milkiilayaasha laabta ballaaran, qoorta dheer oo leh madax weyn, waxay siinayaan aragtida dagaalyahannada.
Ku dar kan kale "muuqaal xun", sababtoo ah cirifka cirifka ah iyo indhaha qotodheer, oo aad go'aansatid inaad hubiso in kuwani ay yihiin gumeysiga deyrka shimbiraha. Laakiin maya, maya jilbaha Pomfret, dabeecad kala duwan iyo xasillooni.
Ugu horreyntii, caleemaha digaagga waxaa lagu magacaabaa brahmaputra, ka dib markii magaca Wabiga Hindiya, oo u wareegaya agagaarka dhulkooda, ka dibna magaca ayaa la yareeyey. Tani waxaa la dhigay bred sababtoo ah ka gudbidda labada kale:
Waxaa la rumeysan yahay in Brahma taranka soo saaray wasiirrada dhismayaasha ee Himalayas, gaar ahaan si ay ula qabsadaan cimilada qabow ee buuraha. Asal ahaan gobollada deyrta waxay xaqiijinaysaa boodh cufan oo cufan, lakabka hoose ee la soo saaray, joogitaanka lakabka dufanka subcutanous iyo miisaanka weyn.
Cayayaanka ilmanimadani waa mid yar, caan ah, muuqaal toosan. Boorashku wuu jilicsan yahay, laakiin maaha dabacsan, laakiin wuxuu kudhowaa jirka.
Muuqaalka ugu muhiimsan ee roodhida, oo xitaa xitaa lugaha ciriiriga ah, waa shucuur qotodheer leh, oo dhammaan dadka qaawan ee jilitaanka Pomrah leeyihiin.
Breed of Brahma waxay u kala qaybsantay hoosaadyo midab leh:
Digaagga madow waxay leeyihiin madax madax-furan, cadaan madow iyo caddaan ah, xajmiga ugu weyn wuxuu la mid yahay hannaan nusqo ah oo baadad ah. Roobabku sidoo kale waxay leeyihiin madax lacag ah oo caddaan ah iyo midab madow iyo caddaan ah, laakiin hoos ku yimaada madow leh baaldi cagaaran oo cagaaran, lugaha waa cawl.
Iftiin (Bramah Colombian) - qaybta ugu muhiimsan waa lacag-caddaan, qoryaha, qaybta sare ee daboolka iyo baalalka koowaad waa madow. Shakhsiyaadka la iska diidey oo leh baalal huruud ah oo baal ah.
Caleemaha huruudka ah (huruud) - digaagga, madaxa iyo jidhka ugu weyn ee jidhku waa mid jaale leh, jilbadu waa dahab-madow. Duufaantu waxay leeyihiin midab madow oo madow, oo ah tuunbada. Daboolka waa madow oo leh cagaaran cagaaran.
Qaybaha - digaagga waxaa jira madaxa madaxa madow, daboolka madow-madow iyo midab aan caadi ahayn ee baalasha kale: saddex wareeg oo wareeg ah oo cad, madow iyo bunni. Gubashadu waxay leeyihiin madaxyo guduudan casaan iyo midab buluug-madow, oo ka hooseeya caloosha iyo lugaha ayaa ah xaji madow oo leh cagaar cagaaran.
Calaamadaha noocyada shimbiraha ee Indochina
Gobollada koonfureed ee Indochina oo isla magaca la mid ah ayaa loo tixgeliyaa inay tahay goobta dhalashada kokhinhin. Sida wakiillada jinsiyada hore, Cochinchins waxaa lagu kala saaraa dhismahooda waaweyn iyo xabadka ballaaran..
Tilmaamahan waxay u wareejiyeen Brahma, laan cusub oo ah noocooda. Laakiin, nasiib daro, miisaanka isku midka ah, kama faani karaan isla hal qodob. Qoorta, dhabarka iyo lugaha ayaa aad u gaaban. Moodhka jilicsan iyo dabacsanaantu maahan mid aad u adag oo jirka ah wuxuuna siinayaa shimbiraha qaab muuqaal ah.
Marka laga gudbi karo qoorta dhabarka ilaa gadaal waa la dareemaa. Combinta Kokhinkhins waa caleen-qaabeeya.
Noocyada midabka kokhinhinov:
Madow - midabka madow ee baaldi ah ee baalasha leh cagaaran cagaaran, loo oggol yahay cadaymo. Dhismaha qalinka ayaa sidoo kale madow. Shimbiraha leh cayayaanka buniga ah waa la diiday.
Caddaan cad - lacag-caddaan ah oo buuxa.
Blue - midab madow oo buluug ah oo buluug ah. Madaxa, boodada, baalasha garabka iyo dabada ayaa leh midab madow.
Midab madow - midabka jilicsan ee jaalaha ah. Daboolka, baalasheeda iyo daboolka ayaa ah midabka quruxda leh ee quruxda badan.
Kuropatchatye - ee digaag, midabka baaluqyada jirka leh qaab muuqaal ah oo khaas ah oo midab cad-brown. Xuddunta qalinka waa madow waana lakabka hoose ee madow. Daboolka waa dahab dahab ah. Gubashadu waxay leeyihiin madax, jilbaha iyo dhexda midab madow ah. Caloolaha, lugaha iyo dabada ayaa madow.
Inkasta oo hiddo-wadaha caadiga ah, digaagga Brahmara digaaggu way ka duwan yihiin awoowayaashooda, Kokhinkhins, ma aha oo kaliya koritaanka iyo muuqaalka, laakiin sidoo kale tilmaamayaasha wax soo saarka.
Tilmaamaha wax soo saarka Breed brahma Breed kokhinhin
Diiri miisaanka 3.5-4 kg 3.5 kg
Miisaanka miisaanka 4.5-5 kg 4.5 kg
Da'da Bisaylkiisa 8 bilood 7-8 bilood
Tirada ukunta sanadkiiba 120-150 pcs 100-120 pcs
Miisaanka caadiga ah ee ukunta 60-65 g 55-60 g
Midabka cunnada kareemka bunni madow
Dhadhami Laf-dhabarku waa khafiifsan yahay Kaydka fatahaada
Sida aan ka arki karno miiska, wakiillada jilitaanka Pomfret ayaa yar yar waxaana la barbardhigayaa koriimo sii kordhaya. Ukunka sanadkiiba, digaagga ayaa keena wax badan oo ay ka weyn yihiin.
Hilibka labada caleemoodba waa tayo sare leh, laakiin caleemaha Brahma waxay leeyihiin lafo dhuuban, oo Cochinmen ayaa laga yaabaa inay kaydsadaan baruurta.
Waxaan ku soo bandhigay digaagga digaagga kor ku xusan, hadda waxaan ku deeqnaa si aan u eegno sawirada.
Qodobada gaarka ah ee lagu hayo dhicida guntada:
Qoryaha oo aan ka badnayn 40 cm (duulaan duuli, ayaa laga yaabaa in la dhaawaco).
Quudinta waa inay noqotaa mid qalalan oo nadiif ah si aan carradu u bararin lugaha.
On the ukunta ma dhul, burburin kara.
Qabowga si fiican ayuu u dulqaadan yahay, uma baahna kuleyl dheeraad ah jiilaalka.
Socdaal joogto ah
Mature late, chicks ilaa 6-7 bilood waxaa la quudin jiray quudinta bilowga ah.
Noocyada content ee digaagga kohinhins:
Xajmiga 20 cm (ma yaqaanaan sida loo duulo).
Kormeer nadiifinta iyo qallajinta qashin-soosaarida si ay u xiirto lugaha lugaha aan helin wasakh.
Socodku waa ikhtiyaari, dareemo wanaag fiican.
Wax qabad la'aan iyo adag tahay, uma baahna kuleyl dheeraad ah.
Xakamee cayilka, cunto kariskiisu yar yahay ama xaddid lacagta.
Labada noocba waxay u adkaystaan ​​qabow, si fudud u adkaysta jiilaalka mana u baahnayn kuleyl dheeraad ah ee coop digaaga. Intaa waxaa dheer, xilliga qaboobaha, wax soo saarka ukunta ee shimbiraha dhirta kor u kaca, haddii ay jirto iftiin fiican.
Ha ilaawin in ay jirto daaqad guriga hoyga ah.
Cochins waa kuwo aan qabyo ahayn oo uma baahna socdaal joogto ah, sida brahma. Chicks Cochin chicks qaawan oo qaawan iyo u baahan tahay kalsooni taxadar leh. In Brahma, "muddada dhalinyaradu" waxay socotaa muddo bil ah, iyo 6-7 bilood oo ah digaagga waxaa la quudin karaa cunto quudin ah.
Labada noocba waxay leeyihiin xasiloon, dabeecadda "Nordic". Cochinquins badanaa waa cayayaan sababtoo ah dabeecadooda. Xaaladdan, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo xaddiga quudinta ama badalida hal-kuleyliye yar.
Waa kuwee u wanaagsan hilibka, iyo ukunta?
Labada noocba waa hilib. Markii ugu horreysay, geedka canfret waxaa loo qaaday sidii cufnaanta hilibka hilibka (roosters uu gaaray 7 kg), ka dibna waxsoosaarka ayaa diiradda saara tayada qurxinta ee wax soo saarka wax soo saarka.
Brahma, sida Cochin, waxay leedahay hilib tayo sare leh. Hase yeeshee, kicinta Cochin ilaa buurnaanta, hilibkoodu maaha inay noqdaan cunto sida tan Brahma.
Marka la eego in labada noocba ay leeyihiin jihada hilibka, waxay si fiican u qaadaan jiilaalka, iyagoo siinaya 100-120 ukum sannadkii loogu talagalay brahma iyo 120-150 ukumood sanadkiiba loogu talagalay Cochinquins.
Yaa ka fiican inuu guriga ku kaco?
Dhinaca kale, macaamiisha Cochin waa kuwo aan qabin xaalad aan loo baahnayn, uma baahna inay socdaan, oo hore u bislaadaan. Dhinaca kale, brahma waa weyn waxayna keenaan ukun badan. Dooro waxa aad doorbidayso: sahlanaanta daryeelka ama waxqabadka sare.
Isbarbar dhigga sifooyinka, ha ilaawin in meesha ugu horeysa ay tahay dhagaxyo lagu qurxiyo. Bal qiyaas sida ay u qurxin doonaan ayna u soo nooleeyaan beertaada hore.
Iyadoo ay suurtagal tahay, waxaan u qaadan karnaa in deriska ay inta badan bilaabi doonaan inay eegaan oo ay ku farxaan digaaggaaga. Dooro jinsiga aad jeceshahay in ka badan dibadda.
Waxyaabaha ay isku mid yihiin Orpingonsons iyo Wyandotas
Digaagga taranka Brahma iyo Kochinquan, oo leh dhammaan waxyaalladooda gaarka ah, waxay leeyihiin waxyaabo badan oo la mid ah noocyada noocan ah sida Orpington iyo Viandot.
Tixgeli sida isla ekaanshaha:
In midabaynta midabyada bisil, orpington iyo viandot sidoo kale waxay u qaadaan midab madow leh oo kaliya cagaaran cagaaran.
Waxaa ka mid ah midabada noocyadaas waxaa jira sidoo kale midab yar oo midab leh.
Iyadoo midab-madow-caddaan ah looma oggola hooska jaalaha ah.
Labada nooc ee noocyadaasi waxay leeyihiin iskudhaf cufan mana garanayaan sida loo duulo.
Labada noocba waxay leeyihiin dabeecad deggan.
Ku dhaji cayilka.
Hayso suuf weyn.
Si fiican u qabow qabow.
Nadiifinta nadiifinta socodka iyo qashinka guriga hoyga, iyo brahma qurux badan iyo Cochin waxay noqon doonaan faanitaanka ee macbudkaaga, oo ku dhajisey dharkooda "pants". Waxaa laga yaabaa in sawirrada aad quruxsan tahay ay ku dhici doonaan wargeysyada maxaliga ah. Kadib, waxaaba suurtagal ah in aan si aan kala sooc lahayn u dhaafin "xiddigaha" leh muuqaal muuqaal ah iyo lugaha cufan!